Tag: email iyo baraha bulshada | Martech Zone
Tag: email iyo baraha bulshada
Gobolka Ganacsiga Muuqaalka, daraasad ay sameeyeen Curalate iyo Ururka Suuqgeynta Internetka, kaliya 8% suuqleyda ayaa si xoogan u rumeysnaa inay si wax ku ool ah u adeegsanayeen sawirro si ay u wadaan kaqeybgalka emaylka. 76% emailada waxaa kamid ah badhamada warbaahinta bulshada laakiin kaliya 14% e-maylka waxaa kamid ah sawirada bulshada. Ballanqaadka asalka ah ee warbaahinta bulshada wuxuu ahaa awoodda sumadaha inay abuuraan xiriir shakhsiyadeed oo ka dhexeeyo macaamiishooda. Tani waxay ka dhigeysaa shirkadaha labadaba kuwo la soo dhaweyn karo iyo kuwo lagu kalsoonaan karo. Isku soo wada duuboo